Xeerarka Dagaalka - Taxanaha 89 iyo 90 - Qaybta Saddexaad - Caasimada Online
Home Warar Xeerarka Dagaalka – Taxanaha 89 iyo 90 – Qaybta Saddexaad
Xeerarka Dagaalka – Taxanaha 89 iyo 90 – Qaybta Saddexaad
Mid saaxiibbadeyda xiran ka mid ah ayaa walaalkiis iigu yimid gurigeyga. Wuxuu i weydiistay cinwaanka Amnesty International in aan siiyo si uu hey’addaas ugu wargeliyo in walaalkii la xiryay.
Kooxdu waxay weli ku eedeysan tahay dembiyo ku abtirsada Qaran – Dumis oo xukunkoodu noqon karo dil toogasho ah.
Waraaqaha qaarkood cinwaankoodu wuxuu ahaa Xaa la yiri?
Waraaqahaas waxaa ka mid ahaa qaar madaxda Qaranka lagu bahdilayo iyo qaar Madaxda looga been sheegayo. Qaab waxay u qornaayeen la leeyahay Hebel wuxuu yiri oo markaa hadal xanaf leh afka loo gelinayo. Siyaad wuxuu yiri iyo Samatar wuxuu yiri ayaa ka mid ahaa, laakiin kuma koobnayn labadaa mas’uul.
Haddii aan soo kobo xeerarka dagaalka ama Axdiga Geneva waxaa uu ka digayaa in wax la yeelo dadka rayidka ah ee ku sugan goobaha dagaalka. Wuxuu ka digayaa in la dilo dadka aan markaa dagaalka ka qeyb qaadan karin sida dagaalyahanka dhaawaca ah ama xanuunsan iyo kuwa is dhiiba. Sidoo kale wuxuu ku baaqayaa in aan marnaba wax loo dhimin goobaha diinta sida Masaajidda, goobaha Caafimaadka, gaadiidka caafimaadka iyo hantida rayidka ee aan dagaalka qeyb ka ahayn.
Sii socod iyo soo laabad waxaan midkiiba saddex maalmood joogay magaalada Nairobi oo ahayd markii iigu horreysay. Waxaan ku degey Panafric Hotel. Soo laabadkeygu wuxuu ku beegnaa Toddobaad taariikhi ah. Waxaa la dumiyey derbigii shubka ahaa ee kor u dhisnaa 3.6 miitir ee kala qeybin jiray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, oo berigaas u kala qeybsanaa laba dal oo kala madax bannaan – Jarmalka Bari iyo Jarmalka Galbeed.
Markii aan Muqdisho ku soo laabtay shaqadeyda ICRC waxaa lagu soo daray in aan wakhtigeyga shaqada Barkiis ka howlgalo Xafiiska Berbera. Iyo sidoo kale in aanan Berbera ku ekaan ee inta aan halkaas joogo aan safarro joogto ah ugu baxo degaannada woqooyi ee ay ICRC ka howgasho hadba midkii howsheyda looga baahdo.
Xafiiska Berbera ku soo xigaa waxay markii dambe hey’addu ka abaabushay Borame. Laakiin howlgalku kuma koobnayn labada magaalo ee wuxuu ku baahsanaa Hargeysa, Burco, Ceeri-Gaabo iyo markii dambe Sallaxleey. Wuxuu gaaray tuulooyinka qaar sida baadiyaha Gobolka Awdal iyo tuulooyin ay ka mid yihiin Darar weyne oo nawaaxiga Hargeysa ah iyo Beer oo Burco bannaankeeda ku taal.